न्यु पनि पुरानो पनि एकै साथ कसरी सम्भव छ? हुँदो रहेछ हेर्नुस् – MySansar
न्यु पनि पुरानो पनि एकै साथ कसरी सम्भव छ? हुँदो रहेछ हेर्नुस्
Posted on April 4, 2018 March 30, 2018 by Salokya
हामी नेपालीहरु अचम्मैका छौँ। एउटाले सफलता पाएपछि त्यसैको कपि गर्न खप्पिस। एक ठाउँमा मोमो पसल अलि चल्यो भने दर्जन मोमो पसल वरपर खुल्छन्। जनकपुरको शिवचौकको दृश्य हो यो। हेर्नुस् त जताततै नवरङ नै नवरङ। उस्तै सुनिने नवराज नाम पनि राखिएको छ। अझ रमाइलो हेर्नुस् त।
कसैले त न्यु नवरंग होटल पुरानो लेखेको रहेछ। भो त अब न्यु भनेको नयाँ अनि कसरी पुरानो? तर चल्दो रैछ।
नक्कलीदेखि सावधान पनि भनिएको रहेछ फेरि।
यो चाहिँ नवरंग होटल पुरानो मात्र। पुरानो चाहिँ सानो अक्षरमा के देख्ला जस्तो गरी।
न्यु पनि पुरानो पनि कसरी एकैचोटी सम्भव छ? तर जनकपुरमा सम्भव छ।
कुन सक्कली कुन नक्कली पत्ता लगाउनै गाह्रो।
10 thoughts on “न्यु पनि पुरानो पनि एकै साथ कसरी सम्भव छ? हुँदो रहेछ हेर्नुस्”
यो गैर कानुनी हो !!! रेगीस्त्रार लाइ समात्नु पर्यो!!!
Nepal को पार्टी को नाम उस्तै उस्तै खाली कमा र धर्को मा फरक अनि तेही सिकेको नि
बाजेको पेडा जस्तै रहेछ. सारा टोलनै असली बाजेको पेडा भनेर क्लेम गर्ने…लोल…दिवंगत बाजेको क्यारेक्टरमा पो प्रश्न चिन्ह लाग्ने…
Saptari tira ko bajeko peda bhandar, purano bajeko pedha bhandar, asali bajeko peda bhandar, asali budho bajeko peda bhandar, asali bajeko naya peda bhandar etcs vane jastai raicha. Ha ha ha ha.
ए राता मकै!
माछा र भात खुवाउने होटेल हो पहिलेको नाम चलेको नवरंग होटेल । सबै! तेसैका सन्तान हुन ।
यो नाम किन राख्न यसरि लागि परेका होलान ? बुझ्न पाए हुने थियो
गज्जब को कुरो , रमाइलो लाग्यो ! पहिला जनक चोक मा एउटा नवरंग होटेल थियो , त्यहाँ को खाना सार्है मिठो ! त्यहाँ दाल, तरकारी हुदैनथ्यो ! खसीको लेदो मासु भात अनि झोल (रस) अनि एक टुक्रा प्याज मात्र ! यो २०४१ साल तिर को कुरा हो ! फेरी २०५५ सालमा जनकपुर जाने मौका पर्यो , धेरै परिवर्तन भैसके छ , साँझ तिर नवरंग होटेल खोज्दै जादा फेला पर्न मुश्किल पर्यो , एउटा होटेल मा एकजना दाई लाई सोधे नवरंग होटेल कुन हो ? उनले हास्दै भने येही त हो नि , म मख्क परेर भित्र बसे, तर खाना पहिले जस्तो मिठो थिएन ! भोलि पल्ट बिहान उज्यालोमा फेरी अर्कै नवरंग भेटे , त्यहाका मालिक लाई सोधेको पुरानो नवरंग त येही नै हो भने , तर खाना ले बतायो उनि पनि झुठ बोल्दैछन ! अनि मलाई लाग्यो असली नवरंग अब बन्द भैसकेको छ , जे जति छन् ति अर्कैले खोलेका हुन् ! पहिलो नवरंग का मालिक एकजना तराइवासी थिए, पछि पहाडवासी ले पनि तेही नामले खोलेछन ! यदि कसैलाई पुरानो र सबभन्दा पहिला खुलेको नवरंग को (यदि हाल सम्म खुला छ भने) बारे थाहा भए कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला, जनकपुर गए भने त्यहाँ जना चाहन्छु !
जे होस् खुशी लाग्यो यो नाम जनकपुरको “ब्रान्ड नेम” भएछ !
जनकपुर तिरको ज्योतिषीलाई नवरङ्ग नाउँ असाध्यै मन परेको हो कि क्या हो ? हुन त खेत जोतेर मान्छे जन्मिने ठाउँ हो, जनकपुर ।
उस्तै उस्तै नाम राखेर होटेल खोल्नेहरू भन्दा उस्तै उस्तै नाम राखेर होटलहरुलाई दर्ता गर्ने सरकारी निकायलाई कार्यबाही गर्नु पर्छ/ तेतिकै त् उस्तै उस्तै नाम भयको होटलहरु दर्ता गरेको हुने सक्दैन/ बेलैमा यस्तो गलत कुरा नसच्याए कुनै बेला अपराधि खोज्नु परेमा प्रहरीलाई अप्थ्रारो पर्छ/